Gbasara anyị - IHE ọkụ ọkụ nwere oke
EYELED LIGHTING LIMITED bụ onye nrụpụta ihe ngosi ọkụ ọkụ LED dị elu & onye na-eweta ihe nchekwa ọkụ dị na HongKong na ShenZhen (aha ụlọ ọrụ ọzọ n'ime) na China, anyị nwere ikike mmepụta kwa ọnwa nke mita 20,000 nke enyo enyo.
Ejiri ahịrị mkpokọta akpaka dị elu na ahịrị ihicha ihe, anyị na-ebuga Ngosipụta LED na ebe niile n'ụwa niile na ọnụ ahịa emere na China na ezigbo ntụkwasị obi.
A na-eji ngwaahịa anyị eme ihe na mgbasa ozi mgbasa ozi n'èzí, mmemme ọdịbendị na ihe ntụrụndụ, ámá egwuregwu, ụlọ oriri na ọ, ụ, ụ, ngosipụta ihe ngosi LED na ihe ịchọ mma, wdg, yana uru usoro nke ihuenyo ngosi agba zuru oke, site na imewe, mmepụta, nrụnye na ndozi, ojiji nke usoro ụzọ agbakwunyere ebe niile iji belata ọnụ ahịa ndị ahịa nke ọma ma nye ndị ahịa ọrụ mmekọrịta chiri anya.
Ejikwala EYELED LIGHITING LIMITED wuo imewe, usoro nrụpụta, ụkpụrụ sistemụ ihe; iji guzobe usoro ọrụ ngalaba na usoro mmejuputa iwu site na ijikọta ndị mmadụ, atụmatụ, ahịa; arụmọrụ ngwaahịa dị iche iche iji gboo mkpa dị iche iche nke ndị ahịa dị iche iche n'ahịa dị iche iche; Ezinaụlọ EYELED na -agbasi mbọ ike idozi nsogbu onye ahịa, mesie ọsọ ọsọ, arụmọrụ, mmekọrịta chiri anya, na -emepụta uru onye ahịa nwere ogologo oge.
Ndị otu ọrụ anyị siri ike, zụrụ azụ, nwere ọrụ nyere ọrụ ịre ahịa usoro niile. Tupu ire ere, anyị na -enye atụmatụ teknụzụ ngwaahịa zuru ezu; Na ire ere, anyị na -eduzi ma na -azụ ndị ahịa anyị igosi nrụnye ihuenyo; mgbe irechara, anyị na -enye ọrụ nke ọma maka mmejọ nke ọma.
Ọnọdụ anyị dị na Shenzhen na -ekwe gị nkwa ngwa ngwa na ọnụ ahịa ngwa ngwa ebe ị na -aga; Site n'ikuku, ụgbọ oloko, n'oké osimiri niile dị. Ngosipụta EYELED dị njikere ịbụ onye mmekọ LED a pụrụ ịdabere na ya iji nwekwuo ọganihu azụmahịa.
Ogo ụlọ ọrụ 3,000-5,000 square mita
Obodo/Mpaghara Ụlọ ọrụ Obodo Shiyan District Baoan Shenzhen City Guangdong Province China
Mba nke Usoro Mmepụta 10
Nlụpụta nkwekọrịta A na -ewepụta ọrụ OEMDesign Ọrụ enyereBuyer Label
Uru mmepụta kwa afọ US $ 50 Nde - US $ 100 Nde